News and Events « Ministry Of Education,Culture & Higher Education Somalia
(Muqdisho) Xaflad lagu xusayo maalinta Afka Hooyo oo ku aadan 21-Febaaryo, 2016, ayaa lagu soo gabbagabeeyey xarunta Akadeemiyada dhaqanka Soomaaliyeed ee Magaalada Muqdisho, diyaarinta Xuskaan waxaa iska kaashaday wasaaradda Waxbarashada Hidddaha iyo tacliinta Sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyo hay’ada UNESCO ee Qramadda Midoobay. Intii ay […]
Khilaaf in mudo ah u dhexeeyey Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya iyo Dalladaha waxbarashada Gobolka Banaadir oo xal lagga gaaray.
(Muqdisho) Kulan qado sharafeed oo ay isugu yimaadeen Dalladaha waxbarashada Gobolka Banaadir iyo masuuliyiinta Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa lagu soo afjaray khilaaf mudda badan soo jiitamayey oo u dhexeeyey dalladaha iyo wasaaradda. Gudoomiye ku xigeenka gudigga culumadda Soomaaliyeed […]
Shir lagu ansixinayo Muqararka Dugsiyada H/dhexe iyo Sare oo soo xirmay.
(Muqdisho) Waxaa 16-Febarayo soo xirmay shirka ansixinta Muqararada Dugsiyada H/dhexe iyo dugsiga Sare, shirkaan oo ka socday Jaamacadda Umadda ee magaalada Muqdisho , waxaa soo qabanqaabiyey Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Shirka oo socday sadex maalmood waxaa ka soo […]
Shirka dib u eegista Manhajka Qaranka Soomaaliya oo soo gabagaboobay.
(Muqdisho) Waxaa dhawaan la soo gababeyey shirka dib u eegista Manhajka Qaranka Soomaaliyeed, shirkaan oo ka dhacay Jaamacadda Umadda ee Magaalada Muqdisho, waxaa soo qabanqaabiyey Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana ka soo qaybgalay, saraakiil dhanka waxbarashada ah ee maamulada Galmud, P/land, […]
Xuska maalinta Far-soomaaliga iyo furitaanka Akademiyadda Qaranka.
(Muqdisho) Munnaasibad lagu maamuusayo xuska maalinta far-soomaaliga oo ku beegnayd 21 janaayo, ayaa ku soo dhamaatay jawi aad u wanaagsan kadib markii ay socotay mudo dhan 4 maalmood, waxa ayna munaasabadu ka socotay dhismaha wayn ee Akadeemiyada ee Magaallada Muqdisho. Mudadii ay munaasabadu socotay waxaa ka soo […]
liiska Ardaydii dugsiyada sare ee shahaadooyinka ka qaatay Wasaaradda waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta sare ee Soomaalia
liiska Ardaydii dugsiyada sare ee shahaadooyinka ka qaatay Wasaaradda waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta sare ee Jamhuuriyada Faderaalka Soomaaliya, hoos ka aqriso magacyada ardayda. liiska_ardaydii_dugsiyadda_sare_ee_shahaadooyinka_aysiisay_wasaaradda_waxbarashadda_hiddaha_taclinta_sare_jfs_ee_soomaliya.xlsx_0
Waaxda tababarada wasaarada Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta sare ee Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya iyo hay’adaha samafalka ee tababarda macalimiinta kala shaqeeya oo ku guda jira, […]
Shaqaalaha iyo madax ugu saraysa wasaarada oo kulamo qaatay.
(Muqdisho) Kulan ay isugu yimaadeen 27-Disember 2015, shaqaalaha iyo madaxda ugu saraysa Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta sare ee Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya ayey ku gorfeeyeen habkii shaqada wasaarada loo dardar galinlahaa. Kulankaan oo soconaayey ilaa sadex saac, ayaa shaaqalaha iyo wasiirku kaga wada hadleen qodobo ay […]
Shir looga hadlaayey Qaabdhismeedka Manhajka Waxbarashada Soomaaliyeed oo soo gabgaboobay.
Shir looga hadlaayey Qaabdhismeedka Manhajka Waxbarashada Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay Hotel City Plaza ee Magaalada Muqdisho Caasimada Soomaaliya. Shirkaan waxaa ka sooqaybgalay masuuliyiin ka socotay Maamul Gololeedyada dalka, xeeldheerayaal Soomaali ah oo aqoon durugsan u leh Waxbarashada, Culumo-awdiin magac ku leh bulshada dhexdeeda iyo qaybaha kala kaladuwan […]
(Muqdisho) Wasiirada Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta sare ee jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya, Marwo Khadar Bashiir Cal,i ayaa sheegtay in wasaaradu ku guulaysatay soocelinta xiriikii waxbarashoee ka dhexeeyey, Soomaliya iyo Masar. Wasiirada oo casho sharaf u samaysay wafti ka socda Wasaaradda Daxbarashada Masar ayaa kala hadashay lana […]